होसियार !! बिल्कुल लै हेला नगर्नु होला ! अबको ३ वर्षसम्म यी ४ राशिहरुमा पर्नेछ ठूलो संकट ! संकट हटाउन यसो गर्नुहोस ! – ताजा समाचार
होसियार !! बिल्कुल लै हेला नगर्नु होला ! अबको ३ वर्षसम्म यी ४ राशिहरुमा पर्नेछ ठूलो संकट ! संकट हटाउन यसो गर्नुहोस !
कुनै समय यस्तो पनि हुन्छ, तपाइको भाग्यको कारणले गर्दा तपाइलाइ राम्रो र नराम्रो हुने गर्दछ ।किनभने तपाइको भविष्य तथा विवाह यही राशी अनुसारै निर्धारण गरिएको हुन्छ । त्यसैले त कसैको विवाह गर्नु परेमा सुरुवातमा राशी नै हेराउने गरिन्छ ।यसै कारण आफ्नो राशी अनुसार तपाइको जीवन कति लाभदायक बन्ने भन्ने निर्भर रहन्छ । तर यी ४ राशी रहेको छ जसले अबको ३ वर्षसम्म तपाइको लाभै मात्र हुने भएको छ । ती राशीहरु हुन सिंह, कन्या, तुला र कुम्भ रहेका छन्। आजको रातको १२ बजे देखि ३ वर्ष सम्म यी ४ राशीहरुलाई राम्रो समय रहने ज्योतिष शास्त्रीहरुले बताएका छन ।
यी राशीहरु भएको मानिसको स्वास्थ्यको सम्पूर्ण विकार हटेर जाने देखिन्छ । अध्ययनमा सफलता हासिल गर्नको लागि खासै दुख गर्नु नपर्ने देखिने भएता पनि शिक्षाको क्षेत्रमा सानो–तिनो पनि लापरवाहीले दुख निम्त्याउन सक्छ । जीवनमा भएका विभिन्न समस्या हल हुने भएको छ ।केहि समय देखि हल नभएको आर्थिक समस्या समेत हल हुने अवस्था आउन सक्ने देखिन्छ । यी राशी हुने व्यक्तिहरुको नबनेको कार्य समेत फत्ते हुने देखिन्छ ।तर यी ४ राशीको यस्तो समय भएपनि यी केही कुरामा भने ख्याल पुयाउनु पर्दछ ।त्यसैगरी यी ४ राशीहरु हेरौ ।
सिंह राशी (मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे) यी अक्षर बाट उठेका राशीको मतिभ्रष्ट हुने समय छ, सचेत रहनु होला । आत्मबलमा कमी आउने छ, ।त्यसैले निर्णय कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् । हल्लाको भर पर्दा दुख पाइने छ तर मिहिनेत गर्दा प्रगति हुनेछ । बुद्धिको उपयोगले लक्ष्य पहिल्याउन सकिने छ । रचनात्मक कार्यमा जुट्दा फाइदा हुने समय पनि छ । तर मन भावना, खेलवाड र कल्पनामा अल्मलिन हुन सक्छ । त्यसैगरी दोस्रो राशी रहेको छ ।
कन्या राशी (टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो)
यी अक्षर बाट उठेको राशीहरुमा घरायसी कामधन्दाका लागि खट्नु पर्ने छ । सन्तानपक्षको मायामा कमी आउने छ । मनोरञ्जन र खेलवाडप्रति मनको आकर्षण बढे पनि इच्छा पूरा गर्न सकिंदैन । रोमान्स र प्रेमप्रसङ्गमा समेत नरमाइलोपन आउने छ । दबाब र तनाव बढेको महसुस हुनेछ । ताके अनुरूप काम नबन्नाले दिक्क लाग्नेछ । जिद्दीपनाले गर्दा काम बिग्रने डर हुने रहेको छ । त्यसैले सचेत रहनुहोला । त्यसैगरी तेस्रो रहेको छ
यी अक्षर यी बाट उठेको मानिसहरुको पनि नयाँ काम सुरु गर्ने समय छ । व्यापारमा मनग्य धनलाभ हुनेछ । साथीभाइले पनि राम्रै सहयोग जुटाउनेछन् । नयाँ उद्योग वा रचनात्मक काममा जुट्ने समय छ । परिश्रमअनुसार उपलब्धि पनि राम्रै पाइने भएको छ । रोकिएका काम पुनः सुरु हुन सक्छन् । कृषिक्षेत्रमा भने अलि बढी परिश्रम र लगानी गर्नुपर्ला । नयाँ कारोबार वा साथीभाइबाट बढी फाइदा लिने समय रहेको जनाइएको छ ।
राशी कुम्भ (गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द)
यी अक्षर बाट उठेकोको पशुपालन तथा कृषि क्षेत्रबाट राम्रो लाभ मिल्ने योग छ । पढाइलेखाइमा प्रगति हुनेछ । बौद्धिक प्रतिस्पर्धामा विजयी भइनेछ, नयाँ ज्ञान प्राप्त हुने योग छ । ठूलाबडाको आशीर्वादले रोकिएको काम बन्नसक्छ । आत्मबल बढ्ने छ । शत्रुहरू पराजित हुनेछन् । मातापिता र अभिभावक वर्गको आशीर्वचन प्राप्त हुनेछ । समाजसेवाका कामबाट लाभ हुनेछ ।तर माथि जे जस्तो भनिए पनि र तपाइ यो माथि लेखिएको राशी भित्र नपरेपनि तपाइ जुन राशी भएपनि तपाइले आफ्नो भाग्यमा भन्दा पनि कर्ममा विश्वास गर्नुहोस ,तपाइको अवस्य सफल हुनुहुनेछ ।
अन्य समाचार– केटीहरु ब्रेकअप पछि पनि पूर्व प्रेमीको बारेमा सोच्छन् यी ८ कुराहरु ! जन्नुहोस
केटीहरु पहिलो लभमा परे भने तन र मन दुवै दिन्छन् । त्यसैले केटीहरुको लागी पहिलो माया विशेष हुन्छ । तर केटाहरको तुलनामा पहिलो माया अलि कम हुन्छ । जसले गर्दा केटीहरु आफ्नो पहिलो लभ ब्रेकअप भएपनि भुल्दैनन् । त्यसैले उनीहरुको पहिलो लभ सफल होस् या असफल त्यसको बारेमा लुकेर विचार गरिरहेका हुन्छन् ।
पूर्व प्रेमीका बारेमा केटीहरु के सोंच्छन् त ?
१. पहिलो कुरा केटीहरु पूर्वप्रेमिकाको धेरै गतिविधी थाहा पाउने माध्यम फेसबुक भएकाले अनफ्रेन्ड भएपनि फेसबुक आइडी खोलेर हेरिरहन्छन्।
२. दोस्रोमा केटीहरु ब्रेकअप पछि आफ्नो पूर्वप्रेमिकाको नातेदार र आफन्त भेट्दा चिन्ता लिने गर्दछन् । किनभने कसरी बोल्ने भन्ने चिन्ता हुन्छ ।
३. तेस्रोमा यदि ब्रेकअपपछि पूर्वप्रमिले फेसबुक स्टाटस लेखेमा मलाई नै छड्के हान्दै लेखेको होला भन्दै दुखी हुन्छन् ।
४. चौथोमा यदि ब्रेकअपपछि आफ्नो प्रेमी अरु केटीसँग हिडेको देखे भने इर्या गदै मनमा अनेकौ कुराहरु खेलाउछन् । वा शंकालु भाव उत्पन्न गराई आफु दुखी हुन्छन् ।
५. पाचौमा यदि केटीहरुले ब्रेकअपपछि आफ्नो प्रेमीसँग कुनै केटीहरु नजिकिएको देखे भने उसको प्रोफाइल खोलेर कस्ता रहिछे भन्दै आफुसँग तुलना गर्छन्।
६. छैटौमा यदि आफ्नो प्रेमीले ब्रेकअप पछि दारी पाल्यो भने दुखी हुन्छन् । किनभने केटीहरुको मनमा मेरै कारणले दारी पालेको हो कि भन्ने सोच्दछन् ।
७ . सातौमा ब्रेकअपछि केटीहरु आफ्नो पूर्वप्रेमीले कस्तो कपडा लगाउछ विशेष ख्याल गर्छन् । ब्राण्डेड लगाउछ या सामान्य । ८. आठौमा केटाहरुको फेसबुकमा कति लाइक, कमेन्ट आउँछ । कसले ट्याग गर्छ । उनीहरुको बारेमा बुझिरहेका हुन्छन् । -र नवौमा धेरै चासो गर्दा गदै नभएपछि वास्ता गर्नै छोडिदिन्छन् ।